“Kulan kasta aan ku ciyaarno Santiago Bernabeu si fiican ayaan ugu raaxeysanaa” – Rakitic – Gool FM
“Kulan kasta aan ku ciyaarno Santiago Bernabeu si fiican ayaan ugu raaxeysanaa” – Rakitic
(Spain) 03 Maarso 2019. Xidiga khadka dhexe kooxda Barcelon ee Ivan Rakitic ayaa la hadlay saxaafada kadib guushii labaad ee xiriir ah ay Real Madrid kaga gaareen garoonka Santiago Bernabeu.
Barcelona ayaa xalay marti ku ahayd markale Santiago Bernabeu si ay u wada ciyaaraan kooxda Real Madrid kulan ka tirsan kulamada 26-aad ee horyaalka La Liga.
Kooxda reer Catalonia ayaa 3 maalin kahor guul 3-0 kaga soo gaartay Real Madrid isla garoonka Santiago Bernabeu, kulankii lugta labaad wareega 4-ta ee Copa del Rey.
Hadan xidiga khadka dhexe kooxda Barcelon ee Ivan Rakitic ayaa ciyaarta kadib la hadlay saxaafada wuxuuna yiri:
“Mar kasta ee aan imaano garoonka Santiago Bernabeu si fiican ayaan ugu raaxeysanaa”.
“Waan ku faraxsanahay shaqada weyn ee aan qabanay kulankan, kadib saddex maalin kulankii El Clásico-da ee aan soo wada ciyaarnay, waxaan u qalanay guushan aan gaarnay, waan ka war qabnay sida aan u dagaalami karno, waxaana ciyaarta ku soo galnay si adag”.
“Waxaan kulankan u ciyaarnay si fiican, kadib markii aan si fiican u falaqeynay qaladaadkii aan sameenay kulankii lasoo dhaafay, waxaan isku daynay in Real Madrid aan ka hor istaagno qeybta labaad ee ciyaarta inay dhaliyaan goolka barbaraha, wuxuu ahaa kulan cajiib ah”.
“Haa… Anigoo ixtiraam buuxa u haya Real Madrid iyo dhamaan kooxaha kale, waxaan horey u qaadnay talaabo muhiim ah, si aan u difaacano horyaalka, waa inaan kula raaxeysanaa guushan jamaahiirteena”.
Guardiola oo si weyn ugu amaanay ciyaartoyda kooxda Manchester City guushii ay ka gaareen Bournemouth